बिहान गरीने सेक्सका यस्ता फाइदा, जानि राखौँ ! - हरियाली नेपाल
# काँग्रेस महाधिवेशन सर्वोच्च माओवादी केन्द्र ‘प्रचण्ड’ कोरोना #राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड # राप्रपा महाधिवेशन
बिहान गरीने सेक्सका यस्ता फाइदा, जानि राखौँ !
काठमाण्डौः शारीरिक सम्पर्क मानिसको जीवनको एक नभई नहुने कुरा हो । यसलाई निकै सही तरिका र सही समयमा गर्न सके एक विवाहित जोडीलाई यसले निकै नै आनन्द र सुख दिने गर्छ । तर, सेक्सको सबैभन्दा राम्रो समय कति बेला होला भन्ने प्रश्न धेरै जसोको मनमा आउन सक्छ । खोजकर्ताहरुले गरको एक खोज क अनुसार स्वास्थ्यका हिसाबले शारीरिक सम्पर्क गर्ने सबभन्दा राम्रो समय बिहान हुन्छ।
अनसन्धानका अनुसार एउटा यस्तो समय हुन्छ जुन बेला सम्पर्क गर्दा निकै फाइदाजनक हुन्छ ।यसले तपाईको शरिरलाई स्वस्थ राख्नमा निकै नै मद्धत गर्छ र दिनभर तपाईमा काम गर्ने फूर्तीलाई पनि कायम राख्छ । अनुसन्धानका अनुसार उक्त समय हो बिहानको साढे ७ बजे ।
अमेरिकाको एक अनुसन्धान वैज्ञानिक तथा यौन विशेषज्ञ डा। डेबी हरबेनिकले एक अध्ययनको दौरान बिहान गरिने यौन सम्पर्क निकै राम्रो हुने बताएका हुन् । उनका अनुसार बिहान गरिने सेक्सले सेक्सको मजाका साथै अन्य फाइदा समेत हुन्छ । बिहान गरिने सेक्सले दिनभर फ्रेस र फिट बनाउन मद्धत गर्छ।
विशेषज्ञका अनुसार बिहान सम्पर्क गर्दा शरिरबाट निस्किने केमिकल्सले अन्य समयभन्दा बढी सन्तुष्टी मिल्छ । यसले गर्दा मानिसलाई स्वस्थ समेत महसुस गराउन सक्छ। बिहान गरिने सेक्सले व्यायाम पनि हुने हुनाले शरिरमा फुर्ती आउने अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्।
अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार यदी बिहान साढे ७ बजे सेक्स गर्ने हो भने मानिसको पुरै दिन निकै राम्रो हुने शरिरमा फुर्ती आउने काम गर्न जाँगर लाग्ने गर्छ। बिहान उक्त समयमा सेक्स गर्दा दुवैलाई थकाई नलाग्ने र निकै संवेदनशिल हुने गर्छन्। यस समयमा अन्य समयमा भन्दा सेक्स हर्मोन धेरै उत्पादन हुने ठहर समेत अनुसन्धानले गरेको छ।महिला स्वास्थ्य